Jereo ny UK sy ny fahitany | Vaovao momba ny dia
Mahalalà an'i Angletera sy ireo toerana fizahan-tany lehibe
El United Kingdom of Great Britain and Ireland Avaratra Izy io dia manana faritany iray misy ny nosy Great Britain, ny faritra avaratry ny nosy Irlandy ary ny nosy mifanila aminy. Hahafantatra bebe kokoa momba ity firenena manana toerana mahaliana maro ity isika, ary koa ireo tanàna lehibe.
Raha tianao ny United Kingdom azo antoka fa te hahalala ny tanàna maro sy ny fanjakana ao aminy ianao. Betsaka ny toerana hitsidika azy hanao lisitra raha ny amin'ny fahitana an'i UK.
1 Fantaro ny UK
2 Inona no ho hita any Angletera
3 Inona no ho hita any Ekosy
4 Inona no ho hita any Wales
5 Inona no ho hita any Irlandy Avaratra
Fantaro ny UK
Ny Fanjakana Mitambatra dia fanjakana mitambatra izay firenena efatra no mandrafitra azy: Scotland, England, Wales ary Ireland Avaratra. Ity firenena ity dia eo amin'ny sisin-dranomasina Atlantika, ny Ranomasina Avaratra, ny English Channel ary ny Ranomasina Irlandy, izay mametra azy. Ny Fanjakana Mitambatra koa dia manana faritany efatra ambin'ny folo any ivelany izay manome antsika ny hevitry ny Fanjakana Britanika taloha.
Ity nosy ity dia nonina hatramin'ny faran'ny vanim-potoana talohan'ny vanim-potoana, avy amin'ny nosy Celtic people. Taty aoriana dia nitranga ny fandresen'ny Romanina, ary lasa faritany empira nandritra ny efa-jato taona. Taorian'ny fianjeran'ny fanjakana dia nisy ny fanafihana nataon'ny Saksons, nanomboka ny Angles sy ny Jutes. Ny vanim-potoana maoderina dia voamariky ny ady ara-pinoana sy ny Fanavaozana. Ny fanjakana britanika dia nahatratra ny faratampony lehibe indrindra tamin'ny 1921 taorian'ny Ady lehibe voalohany. Amin'izao fotoana izao ny fanjakana dia manjaka amin'ny mpanjaka parlemantera izay ny lohany hita maso dia ny Mpanjakavavy Elizabeth II, izay miasa ihany koa ho filoham-pirenen'ireo firenena dimy ambin'ny folo izay ao anatin'ny Commonwealth of Nations.
Inona no ho hita any Angletera
Indraindray isika dia manakorontana an'i Angletera amin'i Angletera, saingy tsy mitovy izy ireo, satria i England dia iray amin'ireo fireneny, tsy isalasalana fa ny malaza indrindra. London dia renivohitra Britanika ary ny tanàna be mpitsidika azy indrindra. Raha hanomboka hitsangatsangana any Angletera isika dia tokony ho eto amin'ity tanàna ity. Ao Londres no ahitantsika ny Parlemanta, ilay Big Ben malaza, ny Tilikambon'i London, tranombakoka ary tsena tsy mampino toa an'i Camden na Portobello.
Misy tanàna hafa mety mahaliana ao Angletera ahoana no maha-Manchester azy miaraka amin'ny lapan'ny tanàna neo-gothic, ny katedraly na ny tranomboky John Rylands. York dia tanàna medieval tsara tarehy miaraka amina foibe manan-tantara mendrika jerena. Ao an-tanànan'i Chester dia azonao atao ny mahita ireo trano hazo antsasaky ny hazo, ary koa ny katedraly Norman na ny lapan'ny tanàna neo-Gothic. Oxford sy Cambridge dia tanàna roa any atsimon'i Angletera ary ivon-toeram-pianarana. Canterbury dia tanàna medieval tsara tarehy misy katedraly Gothic lehibe, satria io no toeram-piangonana ao Angletera. Ny iray amin'ireo tanànany fantatra amin'ny maha toeram-pialan-tsasatra azy dia ny Bath miaraka amin'ireo fandroana romanina na ny Abbey Gothic.
Stonehenge teboka mila fanonona manokana izany. Ity tsangambato megalithic ity dia miorina any atsimon'i Angletera ary manana ivon-toerana fitsidihana ahafahanao mividy tapakila ary hahafantatra bebe kokoa ny niandohan'ity tsangambato ity, izay toa nanomboka tamin'ny 3.000 taona talohan'i Kristy.
Inona no ho hita any Ekosy
Scotland dia firenena iray miavaka amin'ny ala mahafinaritra. Raha tsy maintsy miresaka haingana momba izay ho hitantsika isika dia hifantoka amin'ilay tanàna edinburgh, miaraka amin'ny tranobeny sy ny Royal Mile. Tena ilaina ny miditra amin'ny làlana mamaky ny trano mimanda any Ekosy, izay tsy vitsy, toa an'i Stirling, Dunnottar na Eilean Donan. Raha jerena ny tontolon'ny zaridaina dia tsy tokony halahelo an'i Lake Lake ianao miaraka amin'ny Castle Urquhart, ny faritra Highlands miaraka amin'ny lohasaha Glen Coe ary azo antoka fa ny Nosy Skye.
Inona no ho hita any Wales
Cardiff dia renivohitr'i Wales ary ao no ahafahanao mitsidika ireo galeria Victoria, Queen Street ary High Street, ireo arabe afovoany. Swansea no tanàna faharoa lehibe indrindra ary manana ny National Waterfront Museum izay mampatsiahy ny lasa indostrialy tao an-tanàna. Izy io koa dia manasongadina ny trano fidiovana malaza indrindra any South Wales, ny Mumbles Lighthouse. Wales dia manana tranobe maherin'ny enin-jato, noho izany dia manintona iray hafa izy, toy ny mitranga any Ekosy. Ilaina ny mitsidika ny sasany toy ny Ogmore Castle. Ho an'ireo tia natiora dia manana habaka voajanahary lehibe toy ny Snowdonia National Park na ny Pembrokeshire Coast National Park izy ireo.
Ao Irlandy Avaratra no ahitantsika ny Làlan'ny Giant's, niforona an-tapitrisany taona lasa niaraka tamin'ny vatolampy volkano. Ny tanànan'i Belfast dia manolotra antsika ny fitsidihana ireo sambo izay nananganana ilay Titanic malaza. Zavatra iray hafa azontsika atao ny manaraka ny làlan'ny Game of Thrones, satria ity andiany ity dia notifirina voalohany tany Irlandy Avaratra ary manana toerana maro azo tsidihina. Izy io koa dia manana endrika mahafinaritra, toy ny any amin'ny nosy Rathlin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mahalalà an'i Angletera sy ireo toerana fizahan-tany lehibe